IKingsoft Office ku-ArchLinux + Bug Fixes | Kusuka kuLinux
I-Kingoft Office Kuyihhovisi elinikela kakhulu ukukhuluma ngalo. Imbangela? Simply interface yayo, efanayo (hhayi ukusho ikhophi) yesixhumi esibonakalayo Ribbon kusuka ku-Microsoft.
Kepha ukuze singabi nezinkinga zokuncika (lezo esizisebenzisa ezingama-64 Bits), kufanele sisebenzise amakhosombe I-Multilib.
Ngenxa yalokhu sihlela ifayili /etc/pacman.conf futhi uncomment imigqa:
# [multilib] # Faka phakathi = /etc/pacman.d/mirrorlist
Endabeni I-ArchLinux, I-Kingoft Office ingafakwa kalula kusetshenziswa i-Yaourt:
Uma sekufakiwe, lapho siyisebenzisa, sizothola iphutha elixazululwe ku- Lesi sihloko, kepha nge I-Linux Mint.
Kuleso simo, obekufanele ukwenze ukufaka amaphakheji ahambisanayo:
Bese uwahambisa kufolda yomthombo:
mv mtextra.ttf / usr / share / fonts / wps-office mv symbol.ttf / usr / share / fonts / wps-office mv WEBDINGS.TTF / usr / share / fonts / wps-office mv wingding.ttf / usr / share / amafonti / wps-office mv WINGDNG2.ttf / usr / share / fonts / wps-office mv WINGDNG3.ttf / usr / share / fonts / wps-office
Kepha esimweni se Arch Akudingeki ukuba ube nenkinga ngokwenza lokho. Ukuphela kokufanele sikwenze ukulanda i-.zip evela ku- lesi sixhumanisi.
Siyayivula iziphu bese sihambisa amafayela ayiqukethe njengoba sibonile esinyathelweni esedlule:
Mhlawumbe into ebi kakhulu ngalolu hlelo ukuthi ngesiNgisi futhi asikwazi ukulondoloza ngefomethi ye-.odt, kepha ngicabanga kanjalo LibreOffice akazibekeli izinto ezithile, I-Kingoft Office ingakudlula eceleni bese ibamba abasebenzisi abaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » IKingsoft Office ku-ArchLinux + Bug Fixes
AmaShayina asevele akhiphe ingxenye yale khodi ukuze abantu emphakathini basize ngokuhumusha.
Ukuhunyushwa kweSpanishi kusendleleni.
I-ELAV isimangaze i-Kingsoft Office isebenzisa i-QT.
Inhliziyo yami iphuma kuLibreOffice futhi izohlala ikhona.
Kepha ngifuna ukuheha abasebenzisi abaningi ukuze bazi isoftware yamahhala. Ngicabanga ukuthi i-Opera neKingsoft Office zisiza ngokungaqondile ngokudweba abasebenzisi beWINDOWS ezinhlwini zeGNU / LInux.
Bengifuna ukwazi ukuthi kufanele yini ngempela ukusebenzisa leli thuluzi lamahhala noma ngabe i-libreoffice ingcono, ngoba i-libreoffice inesisindo esingu-425mb kepha kulula ukuyifaka futhi inemisebenzi eyisisekelo, kepha-ke, ngifuna ukwazi ukuthi kungangizuzisa kanjani ukusebenzisa lokhu, kuzofanele ngisebenzise i-yaourt Angikuthandi ukufaka i-XD lapha, ngiyabonga kusengaphambili
Sawubona Linux, iqiniso ngukuthi bengilisebenzisa isikhathi eside futhi ngincoma wena ngaphezu kwanoma yini uma wabelana ngemibhalo nabantu abasebenzisa i-Win ... ngoba ukuhambisana nayo kuhle kakhulu, ngithole kweminye imicu ku-desdelinux abanye abasebenzisi abathi lokho Inokusebenza okungcono, kepha njengoba ngingeyena uchwepheshe kulokhu angikwazi ukukuqinisekisa, engingakuqinisekisa ukuthi ukuhambisana kwamafomethi iWindows enawo, engibona ukusetshenziswa kwayo kukuhle kakhulu.
Uxolo, kepha alikho ikhasi lokuxhumanisa le-.zip. Noma angikubheki
I-Debian 7.2 ifike eceleni kohlelo lwe-Debian Edu